Indlu esemaphandleni esemaphandleni kwiibhanki zaseSeine - I-Airbnb
Indlu esemaphandleni esemaphandleni kwiibhanki zaseSeine
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguJean-Marc
Le ndlu yasentsomini ibekwe kwenye yeelali ezithandekayo ecaleni kweRoute des Chaumieres. I-cottage inamagumbi okulala amane kwaye ikwazi ukulala ukuya kuthi ga kwi-8. Isitiya sibaleka ukuya kwiindonga ze-Seine. Kufuphi neHonfleur, eDeauville, eRouen.
Le ndlwana yasentsomini imi kwenye yeelali ezithandekayo ecaleni kweRoute des Chaumieres edumileyo (iNdlela yeNdwendwe yaseThatshi). Ifumaneka e-Eure, kufutshane nomda weCalvados kunye neSeine-Maritime. I-cottage inamagumbi okulala amane kwaye ingalala ukuya kuthi ga kwi-8 abantu. Kukho igadi emalunga nehektare ebalekayo ukusuka kwindlwana ukuya kuma elunxwemeni loMlambo iSeine. Ilali iphakathi kwepaki yesizwe yaseBoucles de la Seine, kwaye kukho iibhayisekile kunye neendlela zokuhamba intaba ecaleni komlambo ukuya emahlathini ukusuka emnyango. Ngaphantsi kweyure ukuya e-Honfleur, eDeauville, e-Etretat, e-Le Havre nase-Rouen, kumanxweme eengqalutye e-Alabaster Coast kunye neelwandle ezinesanti zase-Cote Fleurie. Isiseko esifanelekileyo sokuhamba, ukukhwela ibhayisekile, igalufa, ukukhwela ihashe, kunye nokuphonononga imbali yaseNorman, inkcubeko kunye nolonwabo lwe-gastronomic.
Le cottage inamagumbi amane okulala kwaye ingalala ukuya kuthi ga kwi-8 abantu kunye nomntwana kwi-cot. Kukho ukufikelela kwesitulo esinamavili kwigumbi elisezantsi elineebhedi ezingamawele kunye negumbi lokuhlambela eline-ensuite kunye neWC. Phezulu kukho amagumbi okulala amathathu, ngalinye linebhedi ephindwe kabini, kunye negumbi lokuhlambela eline-WC. Kukho i-wifi kwi-cottage, kodwa nceda uqaphele, uxhulumaniso lubuthathaka kuneendawo ezininzi zasezidolophini. Ilali ayinacingo kwaye unxibelelwano lwe-intanethi alunamandla. Sinonxibelelwano lwesathelayithi, kwaye umqondiso unokuba mbi kakhulu ukuba imozulu inamafu / iyana. kwaye ngawona maxesha angcono isantya sicotha kakhulu kunesiqhelo eParis okanye eLondon.
Ngaphandle yigadi enehektare enye, ubukhulu becala ingca, ekhokelela kwindlwana ukuya kutsho kuMlambo iSeine. I-Patio ene-barbecue kunye nefenitshala yokuhlala kwaye ubukele iinqanawa zihamba ngomlambo. Iimbono ezithandekayo.
Iilwandle zaseNormandy ziqala ukuhamba ngemizuzu engama-30. Iimayile ezigudileyo, zesanti ecocekileyo kunye needolophu ezinobuhlobo zaselwandle ezinjengeDeauville kunye neTrouville. Iilwandle zaseNormandy D-Day ecaleni konxweme olufanayo. Ukuya emantla ziilwandle ezintle zengqalutye e-Etretat, eFecamp naseSaint-Valéry-en-Caux njengoko zipeyintwe yi-Monet kunye ne-Impressionists. INormandy inezinye zezona zifundo zibalaseleyo eFransi. Izifundo ezikufutshane ziquka i-Etretat, iSaint-Saens kunye neJumièges.
Kukho uluhlu olubalaseleyo lweevenkile ezinobuhlobo kubandakanya indawo yokubhaka kunye nenyama yenyama ngaphakathi kwemizuzu eli-10 yokuqhuba. Kukho iindawo zokutyela eziphezulu ukusuka kusapho ukuya kwinkanyezi yaseMichelin kwiidolophu ezikufutshane. Ivenkile enkulu kunye nelungileyo ePont-Audemer. Imarike yeveki ngeMivulo nangooLwezihlanu ePont-Audemer.
Indlela yokufika apho
Isikhululo seenqwelomoya esikufutshane: Deauville, imizuzu engama-40
Le Havre: imizuzu engama-30
Dieppe: 1 iyure
Calais: iiyure ze-2.5
EParis: iiyure ze-1.5
IPont-Audemer: imizuzu eyi-15
Honfleur: imizuzu engama-25
Jumieges: imizuzu engama-30
Rouen: imizuzu engama-30
EDeauville: imizuzu engama-35
Caen: 1 iyure
U-Giverny (umyezo we-Monet): Iyure ye-1
Bayeux: iiyure eziyi-1.5
Disney Paris: 2 iiyure
I-cottage kunye nedolophana kutshanje iboniswe kwi-Des racines et des ailes, inkqubo yeTV yelizwe laseFransi malunga needolophana ezintle kakhulu eFransi.
Idiphozithi yomonakalo ebuyiselwayo ehlawulwa ngaphambi kokufika. Iilinen kunye neetawuli ezibandakanyiweyo kwintlawulo yokucoca.
4.76 · Izimvo eziyi-67
Umbuki zindwendwe ngu- Jean-Marc
An urban family testing rural waters in Normandy
Ifumaneka ngefowuni, kwaye umgcini wendlu wethu uhlala kufutshane kakhulu kwaye uyafumaneka njengoko kufuneka.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Vieux-Port